Maleeshiyo beeleed ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo oo la kala qaaday. – Radio Daljir
Maleeshiyo beeleed ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo oo la kala qaaday.
Febraayo 15, 2012 12:00 b 0
Galkacyo,Feb 15 -Waxgardka gobolka Mudug ayaa ku guulaystay maanta inay kala qaadaan laba maleeshiyood beeleed oo horaantii todobaadkan dagaal uu ku dhexmaray xaafadda Horumar ee magaalada Gaalkacyo.
Suldaan C/nuur Axmed shiikh Muuse oo ka mid ahaa isimada ka qaybqaatay xalinta xurgufta u dhaxeeyasay maleeshiyo beeleedka dagaalamay ayaa u sheegay Radio Daljir ,dadaalada lagu daminayo colaadda labada maleeshiyo beeleed inay ka qaybqaateen maamulka gobolka Mudug iyo odayaasha ay kasoo jeedaan beelaha dagaalamay.
Dagaalka dhexmaray maleeshiyo beeleedka maanta lakala qaaday ayaa waxaa ku dhintay 6 qof iyadoo tirro intaasi ka badana ay ku dhaawacmeen.
Waqooyiga Kuuriya oo xusaysa sanadguuradii 70-aad ee ka soo wareegtay maalintii uu dhashay hogaamiyihii geeriyooday ee dalkaasi Kim Jong-il
Baahin: Salaasa, Feb 14, C/risaaq C. Silfar ~ Daljir ~ Garowe. R/wasaare Gaas & wafti uu hogaaminayo oo ka gayb galaya shirweynaha dastuurka ee Garowe II; M/weyne Shariif & afhayeen Shariif Xasan oo kulan ka yeeshay xallilka khilaafaadka baarlamaanka; Muran ka dhashay mid ka mid ah hoggaanka Khaatumo oo loo diiday in uu ka dhoogo madaarka Galkacyo.